Momba anay | Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd.
Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd. dia orinasa matihanina mirotsaka amin'ny famokarana, fanodinana ary fivarotana vokatra marokoroko. Nampidirinay ny fitaovana mandroso iraisampirenena, izay afaka mamokatra fanamarihana isan-karazany amin'ny velcro tohana (farango sy tadivavarana), kapila fanaovana sanding PSA (adhensive) ary vokatra hafa manimba arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny famokarana fiara, fanamboarana fiara sy fanavaozana, fanamboarana sambo, fanamboarana fanaka, vokatra elektronika, fitafiana ary indostria hafa.
Nandritra izay taona lasa izay, ny departemantan'ny R&D dia nanao fandrosoana nifanaraka tamin'ny vokatrao ary nanatsara ny fitaovana, ary nanangona traikefa sarobidy be dia be. Ny vokatray dia nahazo fanekena avo lenta avy amin'ny mpanjifa. Ny marika manokana "YS" 、 "XYS" 、 "YUQING" tsy tamin'ny tsena anatiny ihany no nandraisana tsara, fa koa tamin'ny firenena sy faritra maro manerantany.
Ny maha-matihanina, mamorona ary mitady ny hatsarana! Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia ny fikatsahana mandrakizay! Ny ekipanay matihanina dia hifikitra amin'ny fanahin'ny mpanjifa aloha, ary ho vonona hatrany hanome miaraka amin'ny serivisinay matihanina, manadihady ary manohana ara-teknika.
- —Tantara ny orinasa— -
2011: Nifindra tany amin'ny orinasa vaovao
2014: nanangana Free Dust Mobile Dry Grinder
2016: manomboka orinasa iraisam-pirenena Manangana orinasa vaovao, manamboatra sy manamboatra abrasives.
2018: fanamarinana CE lany
2019: Vokatra vaovao novolavolaina: Sander
- —Kolontsaina vondrona— -
Mahay matihanina, mamorona ary mitady ny hatsarana!
Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no tadiavinay!
Ny ekipanay matihanina dia hifikitra amin'ny fanahin'ny mpanjifa aloha ary ho vonona hatrany hanome ny mpanjifa ny matihanina sy ny serivisy ary ny fanohanana ara-teknika anay.
- —R & D Hery— -
XYS dia manolotra fitaovana mandroso iraisampirenena ary nanangana ekipa fikarohana sy fampandrosoana, dokotera, tompo ary manam-pahaizana zokiolona vahiny maro amin'ity orinasa ity izy ireo.
- - Voninahitry ny orinasa— -
- —Fampirantiana an-tsehatra / iorin-trano
- — Mpiara-miasa— -
- —Ny fampisehoana / fampiratiana— -